हाह हाह ... सुजन जी , प्रतेक सालिकहरु संगै आफ्नै भाषा दिनु भएको रहेछ - यो राम्रो र नौलो लाग्यो |
wow..whatacaption...!!!!! wonderful..!!.it made me laugh again and again...
thanksalot foraperfect post..
Interesting post! good imagery.
एकदमै रमाइलो सङ्ग caption राख्नुभएछ।
गजब लाग्यो सालिकको ग्लामर ।
ठाउँमै परेको छ फोटो क्याप्सन पनि । रमाइलो लाग्यो ।
पहिलो सालिक भने ज्यानदार रहेछ, ऊर्जावान् !
सालिक-साक्षात्कारको लागि धन्यवाद भाउजूलाई ।
रमाइलो कथामा जमेर बोलेका तस्विरहरुले निकै राम्रो दख्खल दिए सुजन जी मानसपटलमा । फोटो प्रस्तुत गर्ने तपाइको शैली तारिफयोग्ग छ ।
रमाईलो लाग्यो ।
बिस्तारबादी वा कुनै फुर्को लगाएर गाली गरेपनी भारत संसारको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । हामीलाई हेप्न खोजे पनि, पेले पनि मेरो बिचारमा नेपाललाई धेर-थोर सहयोग पनि पक्कै गरेको छ, भारतले । हिजोको सुख्खा ठाउँ बङ्लोर आज सर्बाधिक चर्चित आइ टि क्षेत्र कहलिएको छ । संसारका धनी देशहरुका प्राबिधिको 'रिपेयर' फोन मार्फत भारतीयहरुले गरिदिने रहेछन । हिजो पि बि नरसिङ्ह रावको पालामा अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका बर्तमान प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको अर्थ ढाचाले आज भारत दिनानुदिन सम्रिद्ध र शक्तिशाली हुँदै गएको छ । गान्धी, नेहरु जस्ता प्रख्यात राजनीतिज्ञ मात्रै होइन रङकर्मबाट राजनीति गरेका कैयन भारतीयहरुले राष्ट्रको लागि पक्कै केही गरे र त जनताले तिनका सालीकहरु सम्झना स्वरुप सुरक्षित राखेका छन ।
फेरी, कती सुन्दर तवरले खिच्नु भएछ, सुजनजीले पनि । तर हाम्रा राष्ट्र निर्माताहरु, चाहे तिनिहरु कुनै 'बादका' ने किन नहुन, का सालीकहरु सबै ढलिसके । सबै ढालिए । महाराजगन्ज चोकको नारायणगोपालको शालिकमा उन्यू पलाएको छ । रानीपोखरि अगाडिको भानुको सालीकमा हामी पान चपाएर थुक्छौ । यस्तै छ ।
आशा छ, सुजनजी काठमान्डौ जानुभएको बखत एकदिन अबश्य उहाको क्यामेराले ति अपहेलित सालीक पनि ब्लगमा उतार्नेछन । रमाइलो फोटो र सान्दर्भिक शब्दहरुको लागि सुजनजीलाई पुन: धन्यवाद ।
जीवन्त रहेछन सालीकहरु! तपाईँका क्याप्सनहरुले अझ जीवन्त बनाए। धन्यबाद!
Nice concept and presentation :)
धेरै नै राम्रो तस्बिरहरु ल्याउनु भयो सुजनजी यी तस्बिरहरुले हाम्रो इतिहाँस बोकेका छन। धन्यबाद यस्तै यस्तै अरु पनि सम्हाल्ने कोशिस गर्नु होला।
तपाईको राम्रा मध्य एक यो पोष्ट लाग्यो। सारै जीबन्त तस्बिरहरू संगाल्नु भएको रहेछ। सबै मुर्तिहरु ले केही न केही बोलेकै छन्। तपाईले पनि बोल्न लगाउनु भयो। यो त ईतिहास हो जो कोहीले पनि आफ्नो ईतिहासलाई जोगाउनु पर्छ। हामीकहाँ भईरहेको ईतिहास मेट्ने खेलको लागी यो चोटिलो प्रहार पनि हो।
शालिकहरु हेर्दे जादा प्राय जसो शालिकको पछाडि तिर केही अर्को बनौटहरु पनि देखे,सायद माला लगाउनको लागी बानाईएको होला। अर्को कुरा यी शालिनहरुको रंग पनि फरक फरक रहेछन्। कुनै अर्थ त पक्कै होला मैले बुझ्न सकिन।
सुन्दर तबरले फोटोहरू राख्नु भयो र अझ क्याप्सनहरुले रमाईलो पो बनाएको छ त। धेरै धेरै धन्यबाद है।
हेरौ हेरौ लाग्ने तस्बिरहरु र अमृत मिस्रित शब्दहरु
को लागि धन्यवाद छ है सुजन जी। आउने दिनहरुमा पनि
यस्तै जानकारीमुलक प्रस्तुतिहरु पढ्न पाइयोस। शुभकामना।
सुजन जी, पहिले पनि आको थिए तपाईं को ब्लग मा तर फोटो ब्लगमा के भनु भनु भो केही पनि भनिन
सालीकहरुको कभरेज देखेपची मैले चाँही भैरव अर्याल सम्झे जस्ले भानुभक्तलाई रत्नपार्क को आफ्नै सालीक अगाडी उभिएर भन्न लगाये
"शव शालीक पुजीत हुन्छ जहाँ सिंगुलै उभीदा तर मिल्छ घ्रिणा"
फोटोग्राफी बारे मलाई तेती जानकारी त छैन तपाईंले दौतरी सँग भन्नुभा जस्तै ठुला ठुला गफ हाक्ने भन्दा आफु बसेको घुमेको ठाउबारे जानकारी दिने सैली राम्रो लाग्यो
बरु चित्र संगै एक दुई लाइनको(बढी हैन नै फेरी)परिचय पनि दिएको भए झन राम्रो पो हुन्थ्यो कि ?
Nice concept n intresting caption! haha!
क्या मज्जा आयो । साँच्चि, सालिकको अर्थ चाहिँ हुनुपर्छ । नेपालका सालिकहरुको पनि राम्रो क्याप्सन राखेर सुजनजीले राख्नु भए झन मजा हुने थियो ।